दर्ता नभएका मोबाइल साउन १ गतेदेखि चल्दैनन् ? यस्तो छ सरकारको तयारी : – Sadhaiko Khabar
दर्ता नभएका मोबाइल साउन १ गतेदेखि चल्दैनन् ? यस्तो छ सरकारको तयारी :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ १८, २०७८ समय: ५:१८:१९
काठमाडौं / सरकारले आगामी साउन १ देखि अ’वैध रुपमा चलेका मोबाइल बन्द गर्ने भनेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । भन्सार छ’लेर आएका अथवा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता नभएका मोबाइललाई सरकारले अ’वैध रुपमा राखेको छ ।
मोबाइल बजार बिस्तार र सुरक्षाको दृष्टिकोणले आईएमईआई नम्बर अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु गर्ने भनेर धेरै पहिलादेखि पहल सुरु भएको थियो । मोबाइल व्यवसायीहरुको धेरै पहिलाको पहल हुदाहुदै पनि काम नभएकाले साउन १ देखि नै सुरु हुनेमा कतिले शंका गरेका छन् ।
हाम्रो फोकस साउन १ गते एमडीएमएस सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि अहिले हामीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालन गर्छौं’ उनले आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै भने ।
प्राधिकरणले साउन १ देखि नै सञ्चालन गर्ने भने पनि यसको तयारीमा अझै केही काम गर्न बाँकी रहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा चाेबहिलका लागि चाहिने उपकरणहरु आउन पाएको छैनन् । भने जडान, परीक्षण र सञ्चालन गर्ने प्राविधिक टोली पनि आइपुगेको छैन ।
यसरी गर्नुहोस् दर्ता :
यो डायल गर्दा मोबाइलले एउटा मात्रै सीम सपोर्ट गर्छ भने एउटा मात्रै आईएमईआई नम्बर देखाउँछ भने यदी मोबाइलले २ वटा सिम सपोर्ट गर्छ भने २ वटा आईएमईआई नम्बर देखाउँछ । आईएमईआई नम्बर २ वटा भए प्राधिकरणमा दुबै नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सा’भार श्राे’त : आइ’सिटी स’माचार ड’टकम